“Manana Nobel, Saingy Tsy Manana Fandriampahalemana” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2016 8:58 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Ελληνικά, Español, عربي, English
Sary: Afisin'ny Netflix ho an'ny “The White Helmets(Satropotsy) ” / novain'i Kevin Rothrock
Nahazo ny loka Nobel Fandriampahalemana ny filoha Kolombiana Juan Manuel Santos tamin'ny 7 Oktobra 2016 noho ny ezaka nataony hamarana ny ady naharitra ampolo taonany maro nifanaovan'ny fitondram-panjakana sy ny vondrona mpikomy tranainy indrindra ao amin'ny firenena, ny Tafika Revolisionera ao Kolombia (FARC).
Nilatsaka toy ny fahagagana ho an'ny maro ny vaovaon'ny fahazoan-doka.
Tamin'ny fitsapankevi-bahoaka notontosaina tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, nitsipaka ny fifanarahan'i Santos hisian'ny fandriampahaleman ny Kolombiana. Raha lany tamin'ny latsa-bato ny fifampiraharahana, dia mety nanamarika ny fiafaran'ny ady izay namoizana ain'olona maherin'ny 220.000 hatramin'ny taona 1958 tokoa izany.
Hoy ny raiko: manana Nobel, fa tsy manana fandriampahalemana
An'arivony kilometatra lavitra izany, hita toy ny safidin'ny maro ireo mpilatsaka an-tsitrapo Sivily ho Fiarovana an'i Syria, malaza amin'ny anarana hoe ‘Satroby Fotsy‘, noho ny fiarovan-doha fotsy hanaovan'izy ireo mandritra ny asa fanavotana aina. Heverin'ny olona ho maherifo amin'ny ady nahafatesana olona mihoatra ny 470.000 tao anatin'ny dimy taona izy ireo.
Maro ihany koa ireo fanehoan-kevitr'olona ambony nanohana ny Satroby Fotsy hahazoany ny loka Nobel-n'ny Fandriampahalemana, anisan'izany ny gazety Guardian sy Time. Maro no nanantena fa tsy vitany hoe manome fanantenana ho an'ny Syriana ihany ny fanomezana ny Loka Nobel-n'ny Fandriampahalemana ho an'ny Satroby Fotsy fa mety hanome fiarovana ny Satro-Potsy amin'ireo fanafihana an'habakabaka ataon'ny fitondrana Assad sy ny governemanta Rosiana.
Raha vao nambara ny Loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana, dia niarahaba ny filoha sy ny vahoakan'i Colombia ny Satroby Fotsy.
Miarahaba ny filohan'i Colombia nahazo ny @NobelPrize ary maniry fandriampahalemana ho an'ny vahoakan'i Colombia izahay
Tsy tafiditra hahazo ny loka ho an'i Santos ny mpitari-tafiky ny FARC, Rodrigo Londondo, antsoina hoe “Timochenko”, sady anisan'ny nanasonia ny fifanekena tsy nahomby. Nanamafy ny komitin'ny loka Nobel-n'ny Fandriampahalemana fa manome voninahitra ho an'ny vahoakan'i Colombia ihany koa ity loka ity.
Afaka mandre ny antso an-tariby teo amin'ny Komitin'ny Nobel Norveziana sy ny Filoha Santos ianao eto ambany:
Avy hatrany ny Twitter dia nanontany momba ny loka nomena ho an'i Santos noho ny fiezahana hitondra fandriampahalemana ao amin'ny firenena:
Ry lehilahy, toa manome Kintan'ny Fandriampahalemana marobe noho ny fandraisana anjara vao haingana ny komitin'ny Nobel
Tsy mampino ho an'ny sasany ny fankasitrahana ny fandriampahalemana izay mbola hoavy. Angelica Casallas, avy ao Kolombia, nampitaha ny fandresena ho an'i Macondo, tanàna foronin'ny saina tao anatin'ny [boky] Zato Taona Nitoerana irery. Nosoratan'ilay mpanoratra malaza indrindra ao Kolombia, Gabriel García Márquez ny tantara.
Gabo (Gabriel García Márquez) no nahazo ny Nobel noho i Macondo, Santos noho ny fitantanana izany.
Tao amin'ny Facebook, Robert Valencia, Kolombiana mpanoratra ato amin'ny Global Voices naneho hevitra hoe:
This is proof that Colombia is the cradle of Magical Realism. While the country is on the brink of (possibly) going to war again after the failed referendum, the President wins the Nobel Peace Prize.
Porofo izao fa akanin'ny Zava-misy Majika i Kolombia. Satria (mety) manatomotra ny ady indray ny firenena taorian'ny fitsapan-kevi-bahoaka tsy lany, nahazo ny loka Nobel-n'ny Fandriampahalemana ny filoha.
Ny hafa kosa nampiasa ilay sary-sy-soratra malaza niparitaka be taorian'ny fanononana tamim-pahadisoana fa mpandresy tamin'ny fifaninanana Oliravina ny Oliravina Colombia, tamin'ny fiandohan'ity taona ity, mba hanehoana ny fifanoherana izay mety hiseho eo amin'ny mpanohana ny “Tsia” sy ny filoha nahazo loka vao haingana:
Raha mandresy tamin'ny fitsapan-kevi-bahoaka ianao/ Raha manolotra ny Nobel ho an'i Santos izy ireo
Nisento kosa ny mpisera Twittrer sasany, tahaka an'i Erik del Búfalo, fa tsy natolotra ho an'ny FARC ihany koa ny loka.
Farafaharatsiny, tsy nanome izany ho an'i Timochenko ihany koa izy ireo. Amin'izao fotoana eo amin'ny olombelona izao, mba misy olona manantena izany karazan-javatra izany koa.
Mandritra izany, niarahaba ny filoha i Ivan Marquez, lehiben'ny fifampiraharahana avy ao amin'ny FARC, hoy izy:
Manantena izahay fa manome hery ho an'ny filoha Santos mba hanome aina ny fifanarahana farany sy ny fahamendrehana ho an'ny Kolombiana rehetra ny loka Nobel.
Nisy kosa ireo be fanantenana fa mety hampiroborobo ny fizotry ny fandriampahalemana ny loka:
Tena nanampy an'i Oscar Arias tamin'ny taona 1987 ny Nobel, raha nanohitra mafy ny ezaka nataony ho an'ny fandriampahelamana Afovoany ny fitondrana Reagan. Tokony hitovy amin'izany ny fahavitrihana ankehitriny
Ny Loka Nobel-n'ny Fandriampahalemana, araka ny Hita avy ao Syria
Maro be ny olona niditra Twitter mba haneho ny fitiavan'izy ireo ny Satroby Fotsy, izay milaza fa nambabo ny ‘fon’ izao tontolo izao ‘ izy ireo na dia tsy nahazo ny loka Nobel-n'ny Fandriampahalemana aza. Ny sioka rehetra manaraka eto izay avy amin'ny Syriana sy ny olon-kafa dia nampitain'ny Satro-Potsy ihany koa avy eo.
Ny valintenin'ny Syriana tamin'ny tsy nahazoan'ny @SyriaCivilDef ny @NobelPrize: “any an-danitra ny lokan'izy ireo, fa tsy eto amin'izao tontolo izao. Mamonjy fanahy ny asan'izy ireo.”
Tena mendrika, na dia teo aza ny vokatry ny fitsapan-kevi-bahoaka nandiso fanantenana. Mampalahelo fa tsy nahazo izany ny @SyriaCivilDef, mila fanohanana bebe kokoa izy ireo ankehitriny.
Miatrika bala, baomba, fampijaliana & fandripahana izy ireo. Tsara vintana isika fa manana mahery fo monina eto amintsika izay nanapa-kevitra hamonjy aina. @SyriaCivilDef
Head of @SyriaCivilDef Raed Saleh tells @AFP the best prize his group could receive is what they do every day — saving a life. #Nobel pic.twitter.com/JSp5zIqZ8G
Nilaza tamin'ny @AFP ny filohan'ny @SyriaCivilDef Raed Saleh fa ny loka tsara indrindra tokony horaisin'ny vondrony dia ny zavatra ataon'izy ireo isan'andro — mamonjy aina. #Nobel
— Nargis Walker (@NargisWalker) 7 October 2016
Tena fihetsika mihaja! ny Satro-Potsy miarahaba ny mpandresy tamin'ny Loka Nobel Fandriampahalemana
Miarahaba ireo mahery fo Syriana nambabo ny fonay sy tsy nahazo loka vato. Ianareo no maherifonay amin'ny Loka Nobel-n'ny Fandriampahalemana
Mpanao sariitatra Palestiniana-Syriana Hani Abbas nanao ity sary manaraka ity ho fanomezam-boninahitra ny Satro-Potsy:
Ny Satroby Fotsy sy ny Loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana. Sariitatra avy amin'i Hani Abbas. Photo Source: Twitter.
Maro ireo nanantena fa hametraka fiarovana ho an'ny fikambanana ny fahazoana ny loka. Nisioka i Ahmad mpikatroka monina ao amin'ny Fanjakana Mitambatra sady tonian-dahatsoratra ao amin'ny Pulse Media Idrees hoe:
Fialàna andraikitra ihany koa izany satria noho ny @NobelPrize, mety ho sarotra amin'i Rosia ny hikendry am-pivitrihana ny @SyriaCivilDef
Ary eny tokoa, nokendrena androany ny foiben'ny Satro-Potsy ao Hama, ao Andrefana-Afovoan'i Syria:
Tamin'ny fotoana nanambarana ny @NobelPrize, lasibatra ny foiben'ny @SyriaCivilDef tao Hama, Efa miverina miasa izy ireo.
Namoy mpilatsaka an-tsitrapo iray hafa ihany koa izy ireo tao Daraa, atsimo-andrefan'i Syria.
Mahmoud Al Muhammad maty androany tao Daraa rehefa namaly tamin'ny fidarohana baomba ny sivily avy nivavaka Zoma.